Taliska ciidamada XDS oo sheegay in gebageba uu marayo howlgalka ciidamadu ka wadaan G/Sh/Hoose | Radio Muqdisho	Monday, May 20th, 2013	Bogga Hore
Taliska ciidamada XDS oo sheegay in gebageba uu marayo howlgalka ciidamadu ka wadaan G/Sh/Hoose
Published on October 19, 2012 by Mowliid · 4 Comments · 1,371 views
Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalka ay Ciidamada qalabka sida ka wadaan gobolka Shabeellada Hoose uu marayo heer gebagebo ah.
Abaanduulaha ciidamada XDS Deneral C/kariin Yuusuf Aadan Dhegabadan oo la hadlay Radio Muqdisho isagoo ku sugan gobolka Sh/Hoose ayaa sheegay in howlgalka ciidamadu ku xorreeynayeeen gobolka Shabeeellaha Hoose uu hadda marayo heer gebagebo ah, isagoo intaa ku daray in ay meesha ka baxday falalkii ay shacabka ku dhibaateeyn jireenn malleeshiyaadka Shabaab.
‘’Gobolka Sh/Hoose kama jiraan wax dhibaato ah, haddana waxaan qorsheeyneeynaa in aan goor dhow ka gudubno gobolkaasi oo aan dabagalno Shabaab iyo Alqaacidda meel kastoo ay dalka ka joogaan’’ ayuu yiri Gen. Dhegabadan.
Dhegabadan ayaa xusay in ay baabi’yeen kooxo ka tirsanaa Shabaab oo mararka qaar jidka u gali jiray ciidamada, kuwaasna howlgalkii ugu dambeeyay ayuu sheegay in lagu xaaqay sida uu hadalka u dhigay.
Howlgalka ciidamada Qalabka sida ayaa hadda u muuqda in uu ka sii dhamaanayo gobolka Sh/Hoose, halkaas oo aheyd meelaha ay ugu xoogga badnaayeen malleeshiyaadka Shabaab ee mar kasta u taagan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed, laakiin taas waxaa ka horjoogsaday ciidamada XDS ee geesiyiinta ah habeen iyo maalinna u taagan difaaca sharafta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
shiiqulkuli ama shig shigow says:	October 19, 2012 at 10:10 am	waa mahad ilaah mar hadii afka ciida loo galiyay kuwii nabad diidka ahaa wuxxu alla u soo bixiyay ragii dhulka lahaay ee shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida sida geesimada leh ee u bad baadiyeen shacabkooda iyo wadankooda guul guul dhagabadan shukran taliye
Reply »	abdi wahaab says:	October 19, 2012 at 10:21 am	waa guul waana guul rabi halkaas ka wada geesiyaasha ciidanka xooga dalka soomalia.
Reply »	Muqtaar says:	October 19, 2012 at 11:41 am	Hamabalyo mida kale radiomuqdisho waxan ka cod sanayaa mesha la isku diban gelinaayo qorista cidamada cirka somaliyed waxana igu so xarira muqtaaryare141@hotmail.com jwb ayan idinka sugayaa?
Reply »	Ugaaska says:	October 19, 2012 at 2:07 pm	Sas waye dhaga badan nolow insha alah bal dahaba kaga jirtaa horumarka dalkena cidankana dhigoda ayey hureen waxana cod sanaa askarti ku geriyoote in dadkodi iyo xasas kodi la iloowin insha alaah